Xanuunka Asaasaqa oo Yurub ku soo yaraanaya - BBC Somali
Xanuunka Asaasaqa oo Yurub ku soo yaraanaya
21 Agoosto 2015
Lahaanshaha sawirka Duke University
Image caption Cilmi baaris lagu sameeyay maskaxda bini'aadamka
Daraasad ay samaysay Jaamacadda Cambridge ayaa muujinaysa in isu dhiganka dadka da'da ah ee xanuunka qaba, kuna nool UK ay hoos u dhacday, si ka duwan saadaashii ahayd in ay sare u kacayso.
Caafimaadka hagaagaya iyo heerka tacliinta ayaa laga yaabaa inay dadka ka ilaaliyaan xanuunka sida ay saynisyahannadu sheegayaan.
Hay'adaha khayriyada ah ayaa ka digay inaysan jirin hubaal ah in ka soo rayntaas ay sii soconayso.
Warbixinta oo lagu qoray wargeyska caafimaadka ee the Lancet, ayaa taxliilinaysa laba daraasad oo mataano ah oo isku si loo qaaday, laakiin ay tobanaan sano u dhaxeeyeen.
Xog laga uruuriyey shan daraasad oo laga sameeyey wadammada Netherlands, UK, Spain iyo Sweden ayaa muujisay in isu dhiganka dadka xanuunka qaba ay degtay muddada daraasaadka - oo u dhaxaysay 20 ilaa 30 sano.
Laakin UK gudaheeda marka la fiiriyo ragga Spanishka ah, hoos ayey u dhacday.
Image caption Cilmi baaristan oo UK lagu sameeyay
UK gudaheeda, xog laga uruuriyey 1991kii ayaa muujisay in 8% dadka da'doodu ka weyn tahay 65 sano ay qaadi karayaan Asaasaqa 2011, sidaasoo ay tahayna kooxda Cambridge waxay sheegeen in tiradu ay xaqiiqdii tahay 6%.
Macnaheeda ayaa ah in qiyaastii 670,000 oo qof ay xanuunka qaadayaan, halkii markii hore laga sheegay tiro ah 850,000.
Caafimaadka soo hagaagaya
Sababta rasmiga ah ee uu heerku hoos ugu dhacay wali lama hubo, laakiin caafimaadka wadammada oo ka soo raynaya ayey u badan tahay inay ugu wacan tahay.
Khataraha xagga qaadidda Asaasaqa waxaa ka mid ah:
Qaar ka mid ah dad daraasado hore lagu sameeyey ayaa noolaa dagaalladii dunida, dagaalkii sokeeye ee Spain ama macaluushii Dutch-ka.
Warbixintu waxay sheegtay in heerarka waxbarashada ay aad isu beddeleen tan iyo markaas.